Ukuthuthukiswa nokunakekela ingane ngemuva konyaka owodwa
Ungondla kanjani ingane yakho? Yini? Nini? Yini okufanele ibe setafuleni nsuku zonke? Lezi zindaba, kanye nokuthuthukiswa nokunakekelwa kwengane emva konyaka owodwa, khathazeka bonke omama ngaphandle kokunye.
Ingane ayenqabe ukudla, kepha ishiya isigamu epulatifomu. Ungadla kanjani i-mare encane?
Ake siqale ngento esemqoka: ungazami ukumnika amandla. Akuyona "i-Papa Mama", noma isithembiso sokuya e-zoo noma ukubukela izithombe, ingane akufanele idle. Ngakho-ke angakwazi ukuhlakulela ukuphazamiseka okuqinile ekudleni, futhi ikakhulukazi amacala ahlukumezayo okuba ngumzali angabangela ngisho neurosis. Uma udokotela wezingane ethi ingane inempilo futhi isebenzayo, ukuqala, zama nje ukunciphisa izingxenye. Phela, izindinganiso azenzelwe ngqo indodana yakho noma indodakazi yakho, kodwa enganeni evamile. Ngaphezu kwalokho, zama ukusungula ukudla futhi unciphise inani lokudla okulula. Umntwana wenqaba ukudla isidlo sasekuseni? Lindela isidlo sakusihlwa. Kodwa ungamniki esikhundleni samakhukhi we-cereal, amaswidi noma umqulu.
Amantombazane aneminyaka engu-10 nje kuphela ubudala, futhi usolwa ngokuthi u-gastritis ane-asidi ephezulu. Isizathu esiyinhloko - okusolwa ngokudla okungalungile.
Ungaphelelwa ithemba. Ukuze ungaphazanyisi i-mucosa ye-gastric ye-girl, ehlukunyezwa yisifo, shintsha ukudla komntwana. Awekho ama-crackers, crisps, ama-biscuits ama-crispy, ama-caramel, ama-chocolate we-bars kanye neziphuzo ze-carbonated! Faka ukudla okuqinile: udla izikhathi ezingu-4 ngosuku (phakathi nokucindezela - kuze kube izikhathi ezingu-7-10 ngosuku), ngesikhathi esisodwa, ezinxenyeni ezincane. Kusasa kungcono ukuqala ngendwangu yamakhemikhali oketshezi emanzini noma amaqanda othosiwe, ashubile. Esikhundleni sejusi kungcono ukunikeza amadodakazi itiye ngobisi noma ngamanzi ahlanzekile (mhlawumbe avela egilini, kunokuba amabhodlela epulasitiki). Ngokudla kwasemini, ungakulungela izitsha zokudla (stewings, meatballs, knels), izinhlanzi abilisiwe, amazambane ahlambulukile emifino. Ngezithelo ezintsha nemifino, qaphela: ezinye zazo zicasula izimpawu ezimbi futhi zikhulise izimpawu ezingathandeki, ngakho-ke zisebenzise kangcono ngesikhathi sokukhululwa kwesifo. Ukudla okunokwelapha kanye ne-prophylactic kunqabela ukuba unqabe inyama ecebile, ama-fish broths (isobho), noma yikuphi ukudla okuthosiwe, ukudla okunamafutha, izimpahla eziphekiwe, imikhiqizo ekheniwe, ukudlala okuneziphuzo kanye nemikhiqizo ehlukahlukene engapheli.
Ngitshele, kufanele kube nini isidlo sasekuseni somfundi osemncane? Ingabe kukhona ingilazi yetiyi ngokwanele ngesangweji noma okusanhlamvu ngobisi?
Ukudla kwasekuseni kwezingane kufanele kube nokondla ngokwanele. Ngakho-ke, kungcono ingane ukuba ipheke ama-oats, i-porridge noma i-omelet. Noma kunjalo, ama-flakes ne-yogurt noma ubisi, futhi, akulimazi impilo yakho. Esikhundleni se-sausage ephekiwe evamile, kungcono ukubeka ucezu olunzima ngesangweji (kunezinto eziningi eziwusizo emzimbeni okhulayo). Kusukela eziphuzweni, khetha okukhethiwe kukhoca noma itiye ngobisi. Ukwengeza okuhle kakhulu - ushizi olungasetshenzisiwe ushizi, i-apula noma isanqante.
Kodwa ukuze sidle ingane kufanele ithole isidlo esinomsoco esinomsoco wenyama, inhlanzi noma izinkukhu.
Luhlobo luni lokudla akufanele lube khona ekudleni kwesikole?
Umyalelo kaNgqongqoshe WezeMfundo ngo-2006 wamukele uhlu lwemikhiqizo engafanele ibe sesikoleni samantombazane esikoleni kanye nama-buffets. Kulolu "hlu olumnyama" kwakuyi-chips, imishayo ye-chocolate, iziphuzo ze-carbonated, kvass, crackers, "umoya" ilayisi, amantongomane, ikhofi. Ngaphezu kwalokho, ama-canteen esikoleni ayephoqelekile ukuba ayeke ukusetshenziswa kwamafutha angulube, umfula kanye nenhlanzi ebhema, amakhowe kanye nemayonnaise.
Beka esikhundleni salo ngemikhiqizo yobisi olubi kakhulu, amantongomane, izithelo ezintsha namajusi. Futhi, isitsha samantombazane esikoleni sinesibopho sokuhlela ukudla okushisayo okungenani kanye ngosuku.
Indodakazi yami ithanda nje noma iyiphi i-soda. Kuyingozi kangakanani?
Lapho eseyingane, kunenqubo esebenzayo yokwenza uhlelo lwethambo lomntwana, futhi ludinga i-calcium ne-vitamin D. Isayensi efakazelwe: zonke iziphuzo eziphathekayo zihlanza lezi zinto ezibalulekile emzimbeni. Ngenxa yalokho, izingane ziqala ukuba nezinkinga ngesistimu ye-musculoskeletal. Futhi ngeziphuzo eziphathekayo kukhona ama-dyes, flavour kanye nama-preservatives okucasula i-membrane yamangqamuzana yomuthi wamathumbu futhi, uma isetshenziselwa njalo, ingabangela ukugulisa umzimba. Ngaphezu kwalokho, ku-1 ibhodlela le-soda liqukethe kuze kube ngu-10-12 wezipuni ushukela, ngakho ukuhlukunyezwa kwalesi siphuzo kungaholela ukwanda kwe-ushukela wegazi futhi kuholele ekubukeni kwesisindo esiningi. Izingane zitholwa ngezigaba: akukho soda! Faka esikhundleni samanzi amazithelo, noma ngisho nangcono - amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi.
Ingane idla ekhaya "ngokubamba." Uyodla isobho elibilisiwe kusuka esiqandisini bese ezolile. Ngemuva kwehora elilodwa - ushokoledi wokufuna. Futhi ngakho usuku lonke. Yini okufanele uyenze kulokhu?
Ngakho akufanele kube khona. Izingane kufanele zifundiswe ukuba zidle ngokweqile ihora. Kanjani? Zama ukuqinisekisa ukuthi ingane phakathi kokudla okuyinhloko ayitholanga lutho esiqandisini noma ngesaladi. Kodwa ngesonto kuphela ukuthuthukiswa kombuso nokunakekelwa kwengane emva konyaka owodwa, isidalwa somuntu omncane sizokhumbula lesi sigaba. Okungukuthi, ngesikhathi sokudla noma isidlo sakusihlwa, isikhathi sizoqala ukukhiqiza ijusi esiswini esiswini. Futhi lokho kusho ukuthi yisikhathi setafula!
Ingane kancane kancane, kodwa kancane kancane isisindo. Manje kusobala ukuthi ukhuluphele kakhulu-ngisho noma ulamba ngokudla okulambile. Futhi noma kunjalo, yini okufanele uyenze okokuqala ezimweni ezinjalo?
With "ukudla indlala" wena nakanjani ukudlulela. Kukhishwe ngokuphelele. Kungakhathaliseki ukuthi omama abakhathazayo bangase basolise, izingane kufanele zidle cishe amahora angu-3-4. Enye into - ukudla okujwayelekile ekhaya. Indlela yokwazi, mhlawumbe wena wayejwayele ukujwayela ingane yakho ngokuzikhandla nsuku zonke ukuba udle amazambane, i-pasta, evame ukuhlanganiswa namaqebelengwane akhe ne-ayisikhilimu. Kanjalo futhi ngaphezu kwalokho ingane ihlala isikhathi eside ku-TV noma ichitha isikhathi esiningi ngemuva kwekhompiyutha, okuyinto encane kakhulu futhi ngokuqinisekile ihamba ngokungafuni. Ingabe kukhona into enjalo? Ngakho, ukuqala, ubuyekeze ngokuphuthumayo imenyu yomntwana. Hlanganisa ufulawa, amafutha, okuthosiwe, ukudla okunomsoco, imikhiqizo eqedile. Kunalokho, imifino esisha (noma ebilisiwe), izithelo, amajikijolo, amantongomane kufanele ahlale etafuleni nsuku zonke. Futhi iningi lamafutha (isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-parsley, anyanisi) kanye nemikhiqizo yobisi evutshiwe, isibonelo i-kefir. Ngaphezu kwalokho, ingane ijwayele ukudla ngaphandle kokusheshisa. Kulokhu, umuzwa wokugcwalisa izakhi uzovela ngokushesha kakhulu. Kodwa lapho umntwana esheshayo futhi ekhathazeka, angadla okungaphezu kokujwayelekile.
Ngakolunye uhlangothi, akunakwenzeka ukulwa nokunciphisa ngokweqile kuphela ngokudla okunempilo. Ukuze ugweme i-hypodynamia, kubalulekile nganoma iyiphi indlela yokuxosha ingane emgwaqweni kaningi. Isibonelo, bhala phansi echibini, isigaba sabakwa-skiers, ibhayisikili, abadansi, kwenye indawo. Lapho ehamba kakhulu, kungcono. Yebo, indlela elula ukufundisa ingane (kanye nomama noma ubaba) ukuhamba nsuku zonke nanoma yisiphi isimo sezulu. Ngokwesibonelo, uma ubuya enkulisa noma esikoleni, phuma esisodwa noma ezimbili izitoreji ngaphambili bese uhamba. Lokhu kushisa amakholori amaningi engeziwe, futhi ngesisindo esijwayelekile ngokomzimba weqembu lobudala lomntwana libuyiselwa ngokushesha. Futhi inkinga iyalala.
Manje kuningi okushiwo mayelana nezinzuzo zokubilisa ubisi ezinganeni. Ingabe kunjalo?
Izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu yobisi lwezilwane (inkomo noma imbuzi, elula noma ekhululekile) akufanele zinikezwe. Ezinganeni ezindala, ubisi lwe-skim lwezingane, olucebile nge-calcium, lungcono kakhulu. Ilawula umzimba, iqinisa isimiso sezinzwa, isiza amafomu kanye nama-vertebrae, futhi ihlasele ingane ngamandla. Kodwa sicela uqaphele: ubisi alusizo kuzo zonke izingane. Uma lo mkhiqizo uhlanzekile ngokweqile kwendodana yakho noma indodakazi yakho, emva kokubonisana nodokotela, hlala ukukhetha kwenye inguqulo "ye-milky": i-kefir, ushizi, i-cottage shiese, i-unsketened, i-cottage shizi, njll. Futhi i-calcium ecebile nezinye izinto ezidingekayo emzimbeni okhulayo.
Isigqi sesimanje sokuphila senza sikwazi ukuthenga ukudla okusheshayo. Okulula futhi okusheshayo, akudingeki ukuba usebenzise ubusuku bonke ekhishini. Noma kunjalo, ngezimpelasonto, lapho kungadingeki ukuba ugijime kuphi, zama ukwenza okuthile okumnandi ngane, isibonelo, ukunquma, ama-pancake noma ikhekhe. Khetha umsebenzi wengane ngokuhambisana namandla akhe namakhono akhe. Izingane ezineminyaka engu-4-7 ubudala zingahogela inhlama, ifomu, izikhwama zikhilimu, ukuhlobisa ikhekhe lesithelo, ugeze izitsha, usule itafula. Uma ingane ingatholi okuthile, ungamhlukumezi nhlobo futhi ungayinaki. Yiba nesineke. Isikhathi esilandelayo kuyoba kuhle.
Izithelo eziwusizo nemifino yabantwana
Ungakhetha kanjani ukudla okulungile kwezingane?
Indlela yokufundisa ingane ukuba idle ukudla okuqinile
Indlela yokudla kahle ingane ngengxube ezinyangeni ezimbili
Ungaziqonda kanjani uma ubisi obanele ingane yakho esanda kuzalwa?
Ukudla okunomsoco: ukondla
Ukuhlukaniswa kwephepha lokushiswa
Isikhathi sokubeletha singamaviki angu-16
Yiluphi uhlobo lwesilwane ongakhetha kuzo ekhaya nasemndenini
Inhliziyo ye-chocolate nge-mousse ekhanda
Ukunakekelwa kwesikhumba ebhodini lokugeza, izikhambi zabantu
Indlela yokunakekela ingulube ye-Guinea
Kungani uphupha ukushayela ephusheni? Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho aziwayo
Ukudla okusajingijolo (izinsuku ezintathu)
Ibhola kusukela ekuzalweni noma i-fitball yezingane
Indlela yokurekhoda umfana ocingweni?
I-Aromatherapy njengendlela yokuqeda ukucindezeleka
Amaqanda othosiwe kuhhavini ye-microwave